Melania Trump ကတော့ Mask ဝတ်ပြီ
US မှာ အလုပ်ပြုတ်သူပေါင်း ၁၆ သန်း ကျော်ပြီ
အသက် ၁၀၁ နှစ် ကိုဗစ်လူနာ ဆေးရုံကဆင်းပြီ
ဟောင်ကောင်၊ စင်ကာပူနဲ့ ထိုင်ဝမ်က ကိုဗစ် အခြေအနေ
ထိုင်ဝမ်၏ ကိုဗစ်-၁၉ တုန့်ပြန်မှု ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးများတွင် ပါဝင်
ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ICU က ထွက်ပြီ
အိန္ဒိယမှာ Lockdown လုပ်ပြီးနောက် လေထုညစ်ညမ်းမှု လျော့နည်းသွား
ကိုဗစ် သက်သာသွားသူတွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြန်တွေ့နေရ
COVID-19 အစုပြုံလိုက် ကူးစက်ခံရလျှင် ကုသရန် ပြင်ဆင်ထားဟု ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ ပြော
ကိုယ့်နိုင်ငံ အရေးကြုံလာရင် အကျိုးစီးပွားအတွက် မဟုတ်ဘဲ ဝိုင်းကူဖို့ လိုပါတယ်
နိုင်ငံခြားဘဏ် ၇ ဘဏ်ကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြု
VOM သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချူပ် ပြန်လွတ်လာ
ပလက်ဝ၌ အမျိုးသားတဦး ကျည်ထိမှန်မှု ဖြစ်ပွား
လိင်ကျွန်သဘောမျိုးကို နှစ်ကာလရှည်ကြာ ယုတ်မာတဲ့ ရာဇဝတ်မှုမျိုးပေါ့
အကျဉ်းသားအချို့ လွှတ်ပေးရန် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆိုနေ
တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသူ ၁၂၈ ဦးကို အမှုပိတ်သိမ်းကာ ပြန်လွှတ်ပေး
အလုပ်လက်မဲ့ အထည်ချုပ် အလုပ်သမားများအတွက် အီးယူ တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့မည်
အင်္ဂပူ၌ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပသည့် သတို့သားနှင့် သတို့သမီးဖခင်တို့ တရားစွဲခံရ
တိုက်ပွဲကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ် နန်းချောင်းဝ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေး
တနင်္သာရီတိုင်း မီတာခ ကင်းလွတ်ခွင့် အစီအစဉ်ရှင်းပြရန် ထားဝယ်တိုင်းရင်းသား ပါတီပြော
အမ်းတွင် လက်နက်ကြီးကျ အရပ်သား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
အလှူအမှား ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်စကား ဆိုလိုက်တဲ့ နေဒွေး
ဗြိတိန်မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ တရက်အတွင်း ၉၀၀ ကျော် ရှိလာ
ARSA နှင့် AA တို့ WFP တံဆိပ်ပါ ထောက်ပံ့ရေးရိက္ခာများ ရရှိနေဟု တပ်မတော် ပြော
ဆန်ကိုမလို ငွေကိုလိုသည် သို့မဟုတ် ဆန်ဆီဆား ထောက်ပံ့ရေး ပေါ်လစီအား သုံးသပ်ခြင်း
ကိုဗစ်ကာလမှာ ဈေးရောင်းမကောင်းလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ ဇာတ်ပို့ နွယ်နီ
ထိုင်းမှာ ညမထွက်ရအမိန့် ချိုးဖောက်တာကြောင့် လူထောင်ကျော် အရေးယူခံရ
“သိန်း ၁၀၀ ငွေညှစ်တဲ့ကိစ္စက မင်းရာဇာရဲ့ အမျိုးသမီးဖုန်းနဲ့ စပြောတာ”
ပြည်ပပြန် စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ Quarantine ၁၄ ရက် နေရမည်
ကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေချိန်မှာ နွမ်းပါးတဲ့ အနုပညာသမားတွေကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Mask တွေ ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်အမှတ်တံဆိပ် Louis Vuitton
ကိုဗစ်အတွက် လှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များ
ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ တားမြစ်မိန့်အားလုံး ပြန်လည် ပယ်ဖျက်
ကိုဗစ်ကြောင့် လာအိုက Luang Prabang ဒေသကို ခေတ္တပိတ်ထားမည်
အမေရိကန်မှာ COVID-19 ကြောင့် တရက်အတွင်း သေဆုံးသူ ၂၀၀၀ နီးပါး မြင့်တက်
ဖူးခက်မှာ Mask မတပ်ဘဲ သွားလာနေတဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုး ဖမ်းဆီးခံရ
ရိုက်ကူးရေးများ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်မှုကြောင့် ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်များ အကျပ်တွေ့
ကလေးကို လိင်ကျွန်အဖြစ် လုပ်ခဲ့တာ
ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် ကသာတွင် Quarantine ဝင်နေရသူများ ရက်ပြည့်၍ နေရပ်ပြန်
ကပ်တဲလ်ရွာ Lockdown ကာလ ၇ ရက် ထပ်တိုး
ကျောက်တော်တွင် လူငယ် ၁ ဦး ကျည်ထိ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် လှူဒါန်းသူတွေကို ညစာအတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ Emilia Clarke
သင်္ကြန်ကာလ Covid-19 ရောဂါ ပျံ့ပွားနှုန်း အလားအလာ
ဝူဟန်မြို့ရောက် အလုပ်သမား ၆၀ ကျော် ပြန်ခေါ်မည်
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဂျပန် ဘွဲ့နှင်းသဘင်များမှာ စက်ရုပ်အစားထိုး အသုံးပြု ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံ၌ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ရောင်းဝယ်မှု ပိတ်သိမ်းရန်လိုလားဟု WWF စစ်တမ်းကဆို
Quarantine ကာလအတွင်း အိမ်နီးချင်းတွေ ပြုံးရယ်စေဖို့ ဟာသ နေ့စဉ် မျှဝေပေးနေသူ
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ အမျိုးသမီး Melania Trump
By ဧရာဝတီ 10 April 2020
အမေရိကန် သမ္မတကြီး ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ Mask ဝတ်ရမယ့်ကိစ္စကို အင်တင်တင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ CDC အဖွဲ့ကြီးကတော့ အမေရိကန် ပြည်သူပြည်သားတွေ Mask မျက်နှာဖုံး ဝတ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးကတော့ တာဝန်မဲ့စွာပဲ Mask ဝတ်တာ၊ မဝတ်တာဟာ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပုံစံမျိုး ပြောခဲ့ပါတယ်။
As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn
— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ အမျိုးသမီး Melania Trump ကတော့ Mask ဝတ်ထားတဲ့ သူမရဲ့ပုံကို ရိုက်ပြီး Twitter မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ CDC အဖွဲ့ကြီးက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို လေ့လာစူးစမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ Mask တပ်ဖို့ကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဒါဟာ အားလုံးကို လုံခြုံဘေးကင်းဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး သမ္မတကတော်က Twitter မှာလည်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးကတော့ ဒီလို Mask ဝတ်ဖို့၊ တပ်ဖို့ကို သူ့အနေနဲ့ စိတ်မဝင်စားတဲ့အကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Mask တပ်ကြသလို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း Mask ဝတ်ထားတဲ့ ပုံကို တွေ့ရပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ အပြင်ထွက်လို့ Mask မဝတ်ရင် ဒဏ်ငွေရိုက်ခွင့် (ဘတ်ငွေ ၂၀၀ – မြန်မာငွေ ၈,၆၀၀ ကျော်ခန့်) ရိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Anutin Charnvirakul ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ Mask မတတ်ရင် မောင်းထုတ်မယ်လို့ ကြိမ်းမောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုရိုနာကာကွယ်ရေးအတွက် Mask မတပ်ဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ သမ္မတထရန့်
ဖလော်ရီဒါ လေဆိပ်အနီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ကားအစီးရေ ထောင်ကျော် ပျက်စီး
Topics: Mask, Melania Trump, သမ္မတကတော်